कात्तिक महीनाको पहिलो कारोबार दिन ५.६६ अंक घट्यो नेप्से
घटेको बजारमा रैराङ हाइड्रोका लगानीकर्ताहरुले सर्वाधिक गुमाए
कात्तिक १, काठमाडौं । कात्तिक महिनाको पहिलो कारोबार दिन आइतवार शेयर बजार ५ दशमलव ६६ अंक घटेर बन्द भएको छ ।
यो दिन परिसूचक १ हजार ५५६ दशमलव ८० विन्दुमा बन्द भएको हो । ठूला कम्पनीहरुको मात्र कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स १ दशमलव ८१ अंक घटेर ३०८ दशमलव २७ विन्दुमा झरेको छ ।
अघिल्लो कारोबार दिन बिहीवार बजार १ हजार ५६२ दशमलव ४६ विन्दुमा बन्द भएको थियो । बिहीवार बजार १ दशमलव २९ अंकले बढेको थियो । नयाँ अर्थमन्त्रि विष्णुप्रसाद पोडेलको पुनः आगमनले उत्साहित भएका लगानीकर्ताहरु आइतवारको कारोबारमा भने पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको देखिएको छ ।
गत बिहीवारदेखि अर्थमन्त्रिको पदभार सम्हालेका पौडेलले पूँजीबजारको थप विकासमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा लगानीकर्ताहरुको छ ।आइतवारको बजार प्रभावित हुनमा नजिकिएको दसैंको खर्च जोहो गर्नेतर्फ लगानीकर्ता लागेको ब्रोकरहरुले अनुमान गरेका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण अन्य व्यवसायिक अवस्था असमान्य बनेका कारण यो क्षेत्रको लगानी विक्री गरी दसैं खर्च जोहो गर्ने धेरै लगानीकर्ता रहेको ब्रोकरहरु बताउँछन् ।
यो साताको कारोबार दसैं खर्च जोहो गर्नेहरुले प्रभावित गर्न सक्ने अनुमान जानकारहरुले लगाएका छन् । तर आगामी दिनमा बजारले उच्च विन्दु कायम गर्ने विश्वास उनीहरुको छ ।
आइतवार घटेको बजारमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयरधनीहरुले सर्वाधिक कमाएका छन् भने रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेडका शेयरधनीहरुले सर्वाधिक गुमाएका छन् ।
यो दिन तेस्रो कारोबार दिनमा पनि जनरल इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य सर्वाधिक ९ दशमलव ७८ प्रतिशतले बढेको छ । उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य आइतवार प्रतिकित्ता रू. ३६ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ४०४ पुगेको हो ।
त्यस्तै रैराङ हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य यस दिन सर्वाधिक ७ दशमलव ५४ प्रतिशतले घटेको छ । प्रतिकित्ता रू. १५ ले घटेर उक्त कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १८४ मा झरेको हो । आइतवार बजार बन्द हुदाँ १२ ओटा समुहगत परिसूचकमध्य व्यापारिक समुह र निर्जीवन बीमा समुहको बढेको छ भने बाँकी समुहको घटेको छ ।
यो दिन व्यापारिक समुहको १ दशमलव २५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा समुहको शून्य दशमलव ४१ प्रतिशत परिसूचक बढेको हो । यो दिन विकास बैंक समुहको परिसूचक सर्वाधिक १ दशमलव ४२ प्रतिशत घटेको छ ।
त्यस्तै विकास बैंकको शून्य दशमलव ४८ प्रतिशत, होटलको शून्य दशमलव १ प्रतिशत, जलविद्युतको शून्य दशमलव ३८ प्रतिशत, वित्तको शून्य दशमलव १९ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको शून्य दशमलव ४८ प्रतिशत, अन्यको शून्य दशमलव १५ प्रतिशत, लघुवित्तको शून्य दशमलव ४५ प्रतिशत, जीवन बीमाको शून्य दशमलव २ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव ३४ प्रतिशत परिसूचक घटेको छ ।
आइतवार १८७ ओटा कम्पनीको रू. १ अर्ब २५ करोड २७ लाख ४८ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । उक्त रकम बराबरको ४३ लाख ५२ हजार १० कित्ता शेयर १६ हजार ८४६ पटकको व्यापारमा कारोबार भएको हो । कुल कारोबारमा सर्वाधिक हिस्सा हिमालयन बैंक लिमिटेडको संस्थापक शेयरको रहेको छ ।
यो दिन प्रतिकित्ता रू. ३०० मा रू. २४ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६०० बराबरको ८ लाख १५ हजार १७२ कित्ता हिमालयन बैंकको संस्थापक शेयर खरीदविक्री भएको हो । यो शेयर ज्योती ग्रूपले ब्रोकर नम्बर ४३ बाट विक्री गरेको र ब्रोकर नम्बर ४० बाट कर्मचारी सञ्चय कोषले खरीद गरेको बुझिएको छ ।
६.२९ अंक बढ्यो नेप्से परिसूचक, ८४ करोडको कारोबार (१ बजेको अपडेट)[२०७७ कार्तिक, ६]
१५९७.७१ विन्दुमा नेप्से, १ अर्ब ६३ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री [२०७७ कार्तिक, ५]
१५९५.१२ विन्दुमा नेप्से, १ अर्बभन्दा बढीको शेयर खरीदविक्री( २ बजेको अपडेट)[२०७७ कार्तिक, ५]